SomaliTalk.com » Odayaasha Dhaqanka oo iska soo xulay Gudigga Xalinta Khilaafaadka Odoyaasha.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xukuumadda kumeel gaarka ah ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee ku shirsan Muqdisho ay iska suleen guddi ka kooban 26 xubnood oo xallin doona Khilaafaadka Odoyaasha. Dhanka kale Ra’iisul Wasaaraha DFKMG ayaa maanta Arbaca u ambabaxay dalka Uganda.
Odoyaasha Dhaqanka Soomaaliyeed ayaa isla soo xuley gudigga Xalinta Khilaafaadka Odayaasha.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta u ambabaxay dalka Uganda.
Muqdisho, June, 27, 2012, —— Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta u ambabaxay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta ka qeyb galay Sanadguuradii 35-aad ee Dowladda Jabuuti.
Muqdisho, June, 27, 2012———- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali, ayaa maanta ka qeybgalay Munaasabad lagu maamuusayay 35 sano guuradii ka soo wareegtay xiligii ay xurnimada qaadatay dowladda Jabuuti.